ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄) ရက်မြောက်နေ့ (၃. ၆. ၂၀၁၉) | Pyithu Hluttaw
(က)-ကနီမြို့နယ်ရှိ လျှပ်စစ်မီတာဘောက်စ်ရရှိရေး ခက်ခဲနေခြင်းကို မည်သို့ဆောင်ရွက်ပေးမည်၊ ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်း မြစ်ဘေးဝဲယာရှိ ကျေးရွာ ၃၅ ရွာအား ဓာတ်အားလိုင်းသွယ်တန်းပေးရန်နှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံများတည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း
(ခ)-ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)တွင် 66/11 KVA ဓာတ်အားခွဲရုံများဆောက်လုပ်ရန်၊ဝါယာကြိုးနှင့်လမ်းမီးသီးများပြုပြင်တပ်ဆင်ရန်ထရိန်းကားနှင့်လျှပ်စစ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများချထားပေးရန်နှင့် ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံတိုးချဲ့ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိတို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဂ)-မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ပန်းတန်ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဒေသခံပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများ (၂၄)နာရီ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုခွင့်ရရှိရေးအတွက် မည်ကဲ့သို့ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဃ)-မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်ကျောင်းများတွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ လုံခြုံအေးချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် လုံခြုံရေများချထားပြီးစောင့်ရှောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(င)-မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်များ၌ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင် ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော PAROLE SYSTEM ကျင့်သုံးရန်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(စ)-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦးအား ဆောင်ရွက်ချက်များနှင်‌့ပတ်သက်၍ကျေနပ်မှုမရှိသူက တိုင်ကြားလာပါက ဌာနတွင်းဖြေရှင်းဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ တာဝန်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ခွင်‌့ ရှိ/မရှိ သိလိုခြင်းနှင်‌့စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း
(ဆ)-ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ၏ တစ်နှစ်တာဆောင်ရွက်မှုများကို စံအကဲဖြတ်စနစ်အရ ရွေးချယ်သော စံပြ ဝန်ထမ်းကောင်းဆုဘွဲ့တံဆိပ်များကို နှစ်စဉ်ချီးမြှင့်ပေးရန်နှင့် တစ်ကြိမ်မကရရှိသူများကို တစ်သက်တာဝန်ထမ်းကောင်းဆုပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(ဇ)-ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ ဖောင်တော်သီကျေးရွာအုပ်စုကို ဖောင်တော်သီမြို့အဖြစ် ပြည်ထဲရေးအမည်ပေါက် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဈ)-ကြီးပေါက်ကုန်း၊ ကွမ်းခြံကုန်းနှင့်ပန်းတောကြီးအုပ်စုအတွင်းရှိလယ်ယာများကိုနွေစပါးစိုက်ပျိုးနိုင်ရန်အတွက်ခတ္တူချောင်း၌ရေသိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးနိုင်မည့်မြောင်းပေါင်တမံနှင့်ရေတံခါးကို ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄) ရက်မြောက်နေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်